Wax Ka Baro Filimada Loogu Jeclaa Bollywood-ka Sanad Walbo Laga Soo Bilaabo 2000 Ilaa 2015 - Hablaha Media Network
Wax Ka Baro Filimada Loogu Jeclaa Bollywood-ka Sanad Walbo Laga Soo Bilaabo 2000 Ilaa 2015
HMN:- Warbixintaan oo aan horey u daabacnay horaantii sanadkaan 2016, waxaa naga codsaday dhawr aqriste oo gadaal kaga soo biiray website-k filimside, maadama aan anaga ku shaqeeno dalabka aqristayaasheen mar kale ayaan dib ugu soo daabacnay
Sanad walbo Bollywood-ka waxay sameeyaan ku dhawaad 200 filim oo qarashaad kala duwan ku baxaan inta badana waxaa guuleestaan ama ganacsi wanaagsan sameeyaan 20 filim ama 22 filim.
Balse waxaa kasii yaab badan in sanad walbo filimada Bollywood-ka ay sameeyaan laga jecleesto 5-filim qiyaas ahaan (Loved Ones).
Sidaa darteed maanta waxaan idiin heynaa filimada Bollywood-ka sameeyeen 15-sano ee ugu dambeesay kuwooda loogu jeclaa sanad walbo.
Xogtaan kuma saleysno filimka guusha uu Boxoffice-ka ka gaaray balse waxay ku saleesan tahay jeceylka filimka loo qaaday ee tiyaatarada dadka ka daawadeen iyo xitaa dadka TV-yada ka daawadeen.
Laga soo bilaabo sanadii 2000 ilaa 2015 waxaa aad loo jecleestay lagana helay filimo kooban kuwaas oo qaateen jeceylka iyo xiisaha daawadayaasha dhanka tiyaatarada iyo TV-yada.
Fadlan hoos kaga bogo filimada la jecleestay oo ay Bollywood-ka sameeyeen 15-sano ee ugu dambeesay.